Hataon’i Mozambika Ho Heloka Ny Hafatra, Ny Mailaka Ary Ny Votoaty An’Aterineto ‘Manevateva’ · Global Voices teny Malagasy
Hataon'i Mozambika Ho Heloka Ny Hafatra, Ny Mailaka Ary Ny Votoaty An'Aterineto ‘Manevateva’
Nandika (en) i @Verdade Newspaper
Voadika ny 04 Avrily 2014 23:21 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, Italiano, Español, Ελληνικά, Français, Português
Olo-tsotra mpitati-baovao sy ny fampiasana SMS, mailaka ary ny tambajotra sosialy tao amin'ny foiben-gazety @Verdade. Sary avy amin'ny Sourcefabric tao amin'ny Flickr (CC BY -NC-SA 2.0)
Ity lahatsoratra navoakan'ny gazety @Verdade ity tamin'ny 2 Aprily 2014 ity dia nosoratan'i Alfredo Manjate (@AlMero05) tany am-boalohany tamin'ny teny Portiogey ary nadikan'i Francisco Chuquela (@chuquela) tamin'ny teny Anglisy.
Manetsiketsika tolo-dalàna miampanga izay lahatsoratra, mailaka sy karazan-dahatsoratra hafa sokajiana ho “manevateva” na “manohintohina ny fiandrianam-pirenena” ny governemanta Mozambikàna.
Nankatoavin'ny Filan-kevitry ny Minisitra [pt] (fahefana mpanatanteraka ao Mozambika izay ahitana ny filohan'ny repoblika, ny praiministra sy ny minisitra rehetra) ilay tolo-dalàna tamin'ny 1 Aprily 2014 ary mbola ho hampandalovina ao amin'ny Antenimiera. Nanazava ny minisitry ny Siansa sy ny Teknolojia, Louis Pelembe fa ahafahana miantoka ny fiarovana ny mpanjifa sy hampakatra ny fitokisana ny fifanakalozam-barotra elektronika ho fomba iray hifandraisana sy hananana tahirim-panaovan-draharaha ny hamafin'ny tolo-dalàna
Faritra misy Wifi maimai-poana ao amin'ny Oniveristen'i Eduardo Mondlane, Maputo tamin'ny volana Jiona 2013. Sary avy amin'i Sara Moreira
Ankoatra ny fepetra momba ny votoaty manevateva, dia miaro ny fidirana an-tsokosoko amin'ny aterineto, ny tahiry ary ny fifanakalozana ara-bola ilay lalàna.
Nanipika i Pelembe tamin'ny tranga manokana momba ny hafatra an-dahatsoratra fa “namboly korontana marobe teo amin'ny firenentsika” izy ireo “tamin'ny tranga iray vao haingana”, .
Nanisy resaka tamin'izay lasa malaza ho “Rotaky ny mofo dipaina” izy – fihetsiketsehana manohitra ny fiakaram-bidin'ny mofo dipaina, ny rano sy ny herinaratra izay nokarakaraina tamin'ny alalan'ny SMS tao Maputo tamin'ny volana Septambra 2010. Taorian'ny fihetsiketsehana, namoaka didy hitsivolana nanery ireo mpampiasa finday [pt] hisoratra anarana ny karatra SIM sy ny mombamomba azy ireo manokana any amin'ny orinasan-telefonina roa niasa tao amin'ny firenena tamin'izany fotoana izany ny governemanta, ankoatra ny fameperana hafa momba ny hafatra an-dahatsoratra.
Hamaly ny filàna fametrahana sehatr'asa handaminana sy hifehezana ny karazan-javatra tahaka izao ilay lalàna araka ny filazan'i Pelembe.
Raha ankatoavin'ny antenimiera izao dia ho sambany hisy tahaka izao eto Mozambika.
Porofon'ny fanarahamaso ataon'ny fanjakana
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2014, nifandray tamin'ny filohan'ny Ligin'ny Zon'Olombelona ao amin'ny faritra, Alice Mabota, ny Polisy Mpanao fanadihadiana heloka bevava ao amin'ny firenena mba hanazava raha izy no nanao ny antso ho amin'ny fihetsiketsehana izay nivezivezy tamin'ny alalan'ny hafatra. Toy izao ny vakin'izany:
Ry fianakaviana Mozambikana, mifohaza! Tsy tian'ny [Filoha] Guebuza ho velon'aina isika. Tsara tsara kokoa raha vitaintsika ny aminy alohan'ny hanaovany antsika. Miantso ny hanaovana fihetsiketsehana ho azy dieny izao izahay mba hialàny eo amin'ny fitondrana dieny mbola tsy tara. Miara miasa amin'izany ezaka izany isika amin'ny alalan'ny fampitàna ity hafatra ity any amin'ny hafa. Ity Somaiso ity dia avy amin'ny Dr Alice Mabota.
Raha nivoaka ny tobin'ny polisy i Alice Mabota, hoy izy tamin'ny mpanangom-baovao:
Nanontany fotsiny izy ireo raha izaho no ambadik'ilay hafatra ka nolazaiko fa tsy izaho izany. Nomeko azy ireo ny nomeraon'ny findaiko telo mba hanaovan'izy ireo fanadihadiana sy hijereny raha nalefa tamin'iray amin'ireo finday ilay hafatra.
Navoitran'ny tatitra antsipirihany momba ny zon'olombelona navoakan'ny Departemantam-panjakan'i Etazonia fa mitsikilo mihaino resaka ataon'ny mpikambana amin'ny antoko politika sy ny mpikatroky ny zon'olombelona tsy manana taratasim-piarovana ny governemanta mozambikana.